Ikhtiyaarada soo kabashada xogta - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>so>Ikhtiyaarada soo kabashada xogta
Ikhtiyaarada soo kabashada xogta
Tallaabada hore, haddii aad rabto in aad soo celiso xogta qaybtan ama xogta ku jirta galka adag, dhagsii sheyga menu-ga abuurka ah "Delete ama Format" Kadib faylka dib loo helo, daaqada ikhtiyaarada soo kabashada ayaa soo bixi doona, sida ku cad shaxdan soo socota:
Bplandatarecovery wuxuu bilaabaa iskaanka
Waad arki kartaa inay jiraan "faylalka Soocelinta Tirtirka", "Soo kabashada oo Dhameystiran", "Sawirro Dheeri ah oo Noocyo Noocyo Yaqaana", iyo seddex ikhtiyaar (horumarka furitaanka baarista skaanka mar dambe ayaa laga wada hadli doonaa). Seddexdan xulasho ayaa runtii ah seddex dariiqo oo lagu duubo warbaahinta kaydinta sida diskiyada adag iyo qaybo ka mid ah marka la soo kabanayo xogta. Dib u soo ceshano faylasha tirtiray
Waa dhaqso badan yahay Faa’iido darrooyinka ayaa ah in ay ku habboon yihiin xaaladda markii faylka hadda la tirtiray oo aan xog cusub oo qoran aan la qorin. Saamaynta raysashada ma fiicna. Qaabkan wuxuu kaliya baari karaa macluumaadka buugga qaybta nidaamka faylalka qeybinta guud ahaan, a 100G Hard disk diskka ah waa la iskaan karaa karaa 10 ilbiriqsiyo maxaa yeelay kaliya macluumaadka macluumaadka buugga qeybinta faylka qeybinta ayaa la iskaankayaa, markaa kaliya Ku habboon xaaladaha fudud ee soo kabashada. Xawaaraha iskaanka ayaa gaabis ah, laakiin saamaynta soo kabashada ayaa aad u wanaagsan, kuna habboon soo kabashada xogta xaaladaha badankood. Qaabkan iskaanka ma ahan oo kaliya maareynayo macluumaadka buugga ee nidaamka faylka qaybsiga, laakiin wuxuu kaloo falanqeynayaa qaybta macluumaadka nidaamka qaybsiga, sida ugu macquulsan ee lagu heli karo macluumaadka macquulka ah ee suurtagalka ah, sidaa daraadeed Saamaynta soo kabashadu aad ayey u fiican tahay, illaa iyo inta xogta aan la qorin, rajada laga qabo soo kabashada guuleysta ee xogtu aad ayey u badan tahay .. U dhiganta, habkan iskaanka wuxuu qaadanayaa waqti badan marka la iskaankaro oo keliya macluumaadka macluumaadka buugga qaybta nidaamka faylalka qeybinta-soo kabashada feylasha la tirtiray Siyaabo badan oo badan ayaa jira. Baadhitaanka dheeriga ah ee noocyada faylalka loo yaqaan
Xawaaraha iskaanka ayaa gaabis ah, diskiga adag iyo qaybo ka mid ah ayaa waxyeelloobay illaa xad weyn, kaasoo had iyo jeer ku guuleysan kara natiijooyin soo kabasho wanaagsan. Habkaan iskaanka ah, qaar ka mid ah barnaamijyada soo kabashada xogta ee loo yaqaan soo kabashada guud, ayaa runtii iskaankaya qaybta ama disk adag bilowga ilaa dhamaad, oo la mid ah macluumaadka faylka ee nooca faylka. Guud ahaan waa meel keyd ah oo keyd ah oo joogto ah (sida kaarka xusuusta ee kamaradaha dhijitaalka ah) Saamaynta soo kabashadu way fiicantahay.Waxaa kale oo ay macno u leedahay diskooga caadiga ah iyo warbaahinta kale ee kaydinta. Faa’iido darrooyinka ayaa ah in faylalka soo kabsaday aysan lahayn magac faylal iyo qaab dhismeedka tusaha. Sababta labaad waxay tahay in dhammaan keydinta kaydinta xogta la xoqdo, taas oo gaabis ah Saddexaad ayaa ah in saameynta dib u soo kabashada feylasha waaweyn ay yar tahay, sababtoo ah itimaalka in si isdaba joog ah loo keydiyo faylasha waaweyn waa yar tahay. Kadib markaad hubiso "scan dheeraad ah oo ah noocyada faylalka loo yaqaan" ikhtiyaar, dhagsii "Xulo nooca file" badhanka ku yaal dhinaca midig si aad u sheegto nooca faylka aad rabto inaad ku soo celiso daaqadda soosaarka, sida hoos ku cad:
Noocyada faylasha ee dib loo soo celin doono
Waxaa jira boqolaal nooc nooc faylal ah halkan, Asal ahaan, Noocyada faylasha ee aad badanaa la soo xiriirto ayaa halkan ku yaal dhammaantood. Caadi ahaan, dhammaantood waa la hubiyaa. Noocyada faylasha la soo ceshan karo ayaa fududayn kara natiijooyinka soo kabashada ee "dhammaan noocyada". Xulashada, dhammaan seddexda xulasho ee soo kabashada waa la hubiyaa (xaaladaha qaarkood, Bplandatarecovery wuxuu si otomaatig ah u xannibi doonaa "Soo kabashada waa la tirtiray") Xulashada "Faylasha" ikhtiyaariga ah, oo la jajabiyey, lama baari karo, sababtoo ah mararka qaarkood qaabkan iskaanka ah micno ma leh), xaaladaha badankood, tani waa doorashada ugu fiican, waxaa lagugula talinayaa inaad korsato. Xaqiiqdii, markii dhammaan saddexda xulasho la xusho, geedi socodka baaritaanka xog-ururinta Bplandatarecovery runti waa sidan:
1.p> 1. Adeegso "Soocelinta tirtirka Qaabka "Faylka", si dhakhso ah u baar diskka adag ama qaybta '
' pp '2. Marka skaanka hore la dhammeeyo ka dib, samee “soo kabasho buuxda” iyo “scan dheeraad ah oo ah noocyada faylalka la yaqaan” ee labada nooc ee iskaanka ;
Intaas waxaa sii dheer, Bplandatarecovery sidoo kale waxay leedahay astaamaha soo socda markii aad ka soo kabaneyso xogta Waxaan gadaal ka sharixi doonaa:
1.p natiijada iskaanka DiskGeniu waa WYSIWYG micnaheedu waa inta lagu jiro iskaanka, faylasha la iska baaraandeeyay, buugaagta iyo macluumaadka kale waxaa loo soo bandhigayaa tixraaca isticmaale;
2. Adeeggu wuxuu joojin karaa ama joojin karaa hannaanka iskaanka markasta, kadibna fiirso Hordhac natiijooyinka iskaanka ee hadda jira isla markaana dib u sii eegista faylasha la iska baarayo si aad u go'aansato haddii aad sii waddo iskaanka; 3. Marka uu adeegsaduhu u baahdo, waxaad sidoo kale joojin kartaa iskaanka oo aad u badbaadin kartaa iskaanka iyo natiijooyinka, si marka aad u soo celiso xogta mar labaad, aad u awooddo Si toos ah u aqri horumarka baarista iyo natiijooyinka, adoo u kaydinaya waqtiga iskaanka ilaa xadka ugu badan.
PreQaybtii dhuntay ma aha mid si adag loo wado lama garanayo, talaabooyinka soo kabashada
NextEegso xogta wadista wadista